MACLUUMAADKA CANIS PANTHER IYO SAWIRADA - EEYAHA
Macluumaadka Canis Panther iyo Sawirada
Lahaanshaha sawirka Lori Berg
madow shar pei pitbull mix
Canis Panther waxaa si xoog leh loogu miiray laabta iyo daanka ballaaran. Dhegaha ayaa la jeexjeexay oo dabada ayaa lagu xidhay, gadaalna waxaa ka soo baxa dhallaanka. Dhogorteeda ayaa gaaban. Midabbada waxaa ka mid ah madow, shukulaato, fawn / buckskin, buluug / cawl. Canis Panthers waa midab adag.
Canis Panther waa xayawaan aad u xasaasi ah oo jecel jacaylka qoyskiisa. Waa caqli badan, fududahay in la tababaro oo aad u daacad ah Waxay ku fiicantahay adeecida, kacsanaanta iyo ilaalinta shaqsiyadeed waana eey aad ufiican. Aad bay u difaacaysaa dhulkeeda waana inay ahaataa bulsheed wanaagsan , waxaa la doorbidi karaa marka uu yar yahay eeyo iyo dadba, gaar ahaan carruurta, maadaama ay u egtahay in dabeecadda ay si dabiici ah uga feejignaato shisheeyaha, in kasta oo uu saaxiibtinnimo badan la leeyahay kuwa uu yaqaan. Si si guul leh loogu hayo Canis Panther, qoysku waa inuu gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Dhamaan xirmo wada shaqeyn hoosta hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Sababtoo ah eeygu wuxuu u gudbiyaa xanaaqiisa ciil iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY ka sarreeyaan nidaamka eyga. Bini'aadamku waa inuu noqdaa kuwa go'aaminaya, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee xiriirka aad la leedahay eygaagu u noqon karto guul dhammaystiran.
Dhererka: Ragga 27 - 30 inji (68 - 77 cm) Dumarka: 24 - 27 inji (62 - 68 cm)
Miisaanka: Ragga 120 - 140 rodol (54 - 63 kg) Dumarka 85 - 105 rodol (38 - 48 kg)
Ma jiraan wax la yaqaan.
Noocan waa in lagu hayaa gudaha dhogortiisa gaaban awgeed.
Noocani waa inuu lahaadaa aag ballaaran oo lagu shaqeeyo, laguna qaado a maalin kasta, l ong socod .
Qiyaastii 10-11 sano
Looma baahna daaweyn gaar ah.
Canis Panther waxaa lagu soo saaray USA sanadihii 1970-yadii waxaa sameeyay Mudane Cleotha 'Scorpio' Jones, Mr. Michael Stratten, iyo Mr. Lucas Lopez iyagoo adeegsanaya madowga Daanyeer Weyn , madow Labrador , Doberman Pinscher , iyo Terffordshire Terrier . Maanta Canis Panther ayaa dhasha run. Waxaa jira khadadka dhiiga oo la aasaasay iyo qolooyin faracyo badan ah.
brussels griffon chihuahua oo la iibinayo
PPDA = Ururka Eyga Ilaalinta Shakhsiyeed
alwaax yeey malakute yaryar oo iib ah
cas sanka pitbull labrador mix
afka madow cur bulldog mix
eeyaha 30 rodol iyo ka yar
shaybaarka iyo isku-darka weimaraner ee iibka ah